एमालेले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्र पुरानै ! कुरा मेट्रो र मोनोरेलकोGandaki Press
एमालेले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्र पुरानै ! कुरा मेट्रो र मोनोरेलको
बैशाख १७, २०७९ १६:३६ मा प्रकाशित
पाँच वर्ष अघि पोखरा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा मानबहादुर जिसी र मञ्जुदेवी गुरुङको उम्मेदवारी थियो ।
उम्मेदवारी दिदैँ त्यतिबेला घोषणा गरेको घोषणापत्रमा ‘पोखरालाई प्रदेशको राजधानीमात्र नभई, कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको स्थलमार्ग र केरुङ, काठमाण्डौं, पोखरा हुदैँ लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग ।
पोखरामा वैज्ञानिक ढङ्गले ट्राफिक व्यवस्थापन गरी मेट्रो सेवाको सञ्चालन गरिने भनि लेखिएको थियो । अघिल्लो उम्मेदवारले घोषणापत्रमा भएका कुनैपनि काम गर्नै सकेनन् ।
अहिलेको प्रतिबद्धता पत्रमा समेत पहिलोको कुरालाई शब्दमा घटाउँदै लेखिएको छ ‘महानगरमा पर्ने मध्य पहाडी लोकर्माको खण्डलाई छिटो निर्माण गर्न, केरुङ,काठमाडौं हुदैँ पोखराबाट लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सञ्चालन’ लेखिएको छ ।
त्यसतै अर्को बुदाँमा ‘पोखरा महानजगरभित्र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मोनोरेल तथा मेट्रोरेल संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य आरम्भ गरिनेछ ।’
अहिले पोखराको मेयरमा कृष्ण थापाको उम्मेदवारी रहेको छ । उपमेयरमा भने मञ्जुदेवी गुरुङनै दोहोरिनुभएको छ । सनिबार पोखरा सभागृहहलमा एमालेले जारी गरेको घोषणा पत्रमा अधिकांश पुरानै कुराहरु दोहोरिएका छन् ।
एमालेले पुरा गर्न नसकेका कामहरु नै पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पाँच वर्ष अघि घोषणापत्र लेखिएको थियो अहिले नयाँभनेको घोषणापत्र नभई प्रतिबद्धता पत्र मात्रै हो त्यहाँ भित्र हेर्ने हो भने पहिला र अहिले शब्द परिवर्तन छन् तर, काम भने उही रहेको छ ।
यसअघि एमालेकै मेयर मानबहादुर जिसी र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले नेतृत्व गरेको महानगरलाई सुशासनको नमूना बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
अर्को चुनाव लड्दिँन ः कृष्ण थापा
एमालेको तर्फबाट पोखराका मेयरका उम्मेदवार कृष्ण थापाले यो चुनाव आफ्नो अन्तिम चुनाव भएको घोषणा गरेका छन् ।
आफू विजयी भए महानगरबाट पाउने सेवा र सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कादमको अभियान चाल्ने बताए । ‘चुनाव लड्न गाह्रो हुँदै गएको छ ,मेरो चुनाव अन्तिम चुनाव हुनेछ र अब चुनाव लड्ने छैन’,उनले भने, २०३८ सालदेखि अखिलमा संगठित भएर सुरु गरेको राजनीतिक जीवन यो कार्यकालपछि अन्त्य गर्दछु ।
म अस्पतालको जागिर छाडेर पार्टीमा लागेको हो, ३ महिना बिदा लिएर अमेरिका गएको बाहेक मैले सधैँ पार्टीको काम गरेको छु ।सबै कुरा पार्टीलाई दिएको छु,अब मसँग मेरा शरीरका अंगहरुमात्रै छन् र यी अंगहरु पनि म दान दिने घोषणा गर्दछु ।’
पार्टीको प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर नचाहेकी तर उम्मेदवार बनाइएकी मञ्जुदेवी गुरुङले पुनः पार्टीले आफूलाई उपमेयरको उम्मेदवारको जिम्मेवारी दिएकोमा केन्द्रीय कमिटीलाई धन्यवाद दिइन् ।